3 ohatra mahery vaika amin'ny fampiasana ny Technology Beacon Mobile App hampitomboana ny varotra antsinjarany | Martech Zone
Vitsy dia vitsy ny orinasa manararaotra ireo mety mbola tsy voapetraka amin'ny fampidirana ireo teknolojia fanilo ao amin'ny rindranasan'izy ireo mba hampitomboana ny maha-izy azy sy ny vintana hanidiana fivarotana folo heny amin'ny alàlan'ny marketing akaiky vs fantsom-barotra mahazatra.
Raha 1.18 miliara dolara amerikana ny vola miditra amin'ny teknolojia fanilo amin'ny taona 2018, tombanana ho tonga amin'ny tsena 10.2 miliara dolara amerikana amin'ny taona 2024.
Global Market Beacon Technology
Raha manana orinasa ara-barotra na varotra miorina amin'ny varotra ianao dia tokony handinika ny fomba mahasoa ny orinasan-jotra fampiharana ny asanao.
Ny fivarotana fivarotana, trano fisakafoanana, hotely ary seranam-piaramanidina dia isan'ny orinasa afaka mampiasa fanilo mba hampitomboana ny fividianana, fitsidihana ary fitsidihana mivantana amin'ny varotra mivantana amin'ireo mety ho mpanjifa akaiky amin'ny alàlan'ny fampiharana azy ireo.
Nefa alohan'ny hijerentsika ny fomba fampiasan'ny orinasa an'ity haitao ity hampitomboana ny varotra dia andao hofaritana hoe inona ny teknolojia fanilo.
Beacons dia transmitter tsy misy tariby izay afaka mandefa data sy fampandrenesana dokam-barotra amin'ny apps amin'ny finday avo lenta ao anatin'ny elakelin'ny fanilo. iBeacon dia natolotry ny Apple tamin'ny iPhones-n'izy ireo tamin'ny 2013 ary ny telefaona finday misy herinaratra Android dia nitazona ny lohan'ny famoahana an'i EddyStone tamin'ny 2015.
Na dia ampahany amin'ny Android fotsiny aza no anohana an'i Eddystone dia misy ihany tranomboky loharano misokatra izay manohana tanteraka ny teknolojia fanilo rindrambaiko amin'ny Android, mahatonga ny zotram-pahaizan'ny mpampiasa Android sy iOS ho azo amidy.
Raha te hiasa ny jiro dia mila mifandray amina mpandray (smartphone) izy ireo ary fampiharana iray novolavolaina manokana hahafantarana sy hitantanana ny fanilo tonga. Ny fampiharana dia mamaky mpamantatra tokana amin'ny finday avo lenta izay ampiarahina amin'ny fanilo mba hisehoan'ny hafatra namboarina.
iPhones dia manana teknolojia beacon tafiditra ao anaty fitaovana, ka tsy mila mavitrika ny fifandraisana amin'ny finday. Ao amin'ny sehatra Android-Powered, ny fampiharana dia tsy maintsy mandeha amin'ny telefaona hahazoana mari-pamantarana fanilo, farafaharatsiny ho fizotry ny lasa.
Ny mpivarotra sasany izay manana fampiharana azo ampiasana fanilo dia CVS, McDonald's, Subway, KFC, Kroger, Uber, ary Disney World.
Ahoana no fomba hampiasana ny haitao App Beacon amin'ny marketing?
Ny tombony lehibe indrindra amin'ny fampiharana teknolojia fanilo no fotoana handefasana tolotra manokana sy hafatra ho an'ny mpanjifa efa akaiky. Saingy misy ihany koa ny lafiny fandinihana ampiasaina hahazoana fahazoan-dàlana amin'ny mpanjifa amin'ny antsipiriany momba ny fihetsiky ny mpivarotra mba hampitomboana ny fahombiazan'ny tetikady marketing.
Ohatra 1: Mandefasa tolotra fampiharana miorina amin'ny toera-misy any amin'ny Toeram-piantsonana
Ny marketing dia azo faritana tsara satria afaka mamantatra ilay rindrambaiko ny jiro ary mahafantatra fa akaiky ny mpanjifa, noho izany dia tena ilaina sy mora ny mitsidika ilay fivarotana.
Raha vantany vao tafiditra ao amin'ny toeram-piantsonana ny mpanjifa mety misy rindrambaiko napetraka amina magazay manokana eo akaikin'ny toeram-piantsonana dia afaka mahazo fampandrenesana fihenam-bidy manokana ihany izy ireo anio ary miaraka amina fiarahabana manokana.
Amin'ny fanaovana an'io, vao avy namorona 1) fahatsapana fandraisana miampy miaraka amin'ny 2) ny fivarotana ary maika ny tolotra manokana ho an'ny 3) fotoana voafetra. Ireo dia ny ABCs ny fividianana fividianana ary ny teknolojia fanilo dia nahatratra ny teboka telo fotsiny tsy nisy fitsabahan'ny olombelona na vola fanampiny. Mandritra izany fotoana izany dia nitombo be ny fahafahan'ny fiovam-po nividy.
Target dia iray amin'ireo fivarotana antsinjarany mampiasa teknolojia fanilo miampy ny app Target hanentanana fampandrenesana ho an'ny mpanjifany manerana ny firenena. Ny mpanjifa dia hahazo fampandrenesana hatramin'ny 2 isaky ny dia mba tsy hampihoatra ny fandefasan-kafatra sy ny fandaozana ny fampiharana. Ireo fampandrenesana ho azon'ny mpiantsena dia tolotra manokana sy entana mirona amin'ny media sosialy ho fitaomam-panahin'ny mpividy.
Ohatra 2: Mahazoa fiheverana momba ny fitondran-tena amin'ny fivarotana an-tsena
Fantatra hatry ny ela fa zava-dehibe ny fametrahana ireo vokatra ao anaty magazay, toy ny fametrahana vatomamy eo amin'ny mason'ny ankizy amin'ny fisoratana anarana, ka manome fotoana ampy ny ankizy hangataka fividianana vatomamy.
Tamin'ny alàlan'ny teknolojia fanilo fampiharana no nahitàna ny fahitana ho 11. Ny mpivarotra am-barotra izao dia afaka manara-maso ny fihetsiky ny mpampiasa ary mahazo sarintany mazava tsara momba ny dian'ny mpanjifa tsirairay avy amin'ny fivarotana, miaraka amin'ny fampahalalana momba ny toerana ijanonany, ny zavatra novidiana ary ny ora amin'ny andro fivarotana.
Ny vaovao dia azo ampiasaina hamindra ny lisitra hanatsarana ny traikefa amin'ny fivarotana. Ny zavatra malaza kokoa dia aseho amin'ny làlana malaza.
Manampia sarintany fivarotana amin'ny fampiharana ary lehibe kokoa ny fahafahan'ny mpanjifa mahita zavatra maro hividianana entana.
Ny magazay fivarotana fitaovana Lowes dia nampiditra sehatra mpivarotra finday tao amin'ny fampiharana finday an'i Lowe hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa. Afaka mikaroka vokatra ny mpanjifa ary mahita eo no ho eo ny fisian'ny lisitra ary koa ny toerana misy ilay entana eo amin'ny sarintanin'ny magazay.
Tombontsoa iray fanampiny amin'ny fampidirana fanilo amin'ny fampiharana dia ny fampitomboana ny isan'ny mpampiasa fampiharana, ny vintana amin'ny fivarotana an-tserasera, ary ny firotsahan'ny marika amin'ny ankapobeny.
Ohatra 3: Personalization ho an'ny mpanjifa mandroso
Ny orinasam-barotra dia nanolotra traikefa fiantsenana manokana. Azon'izy ireo atao izany noho ny fanarahana ny fandrosoana alefa amin'ny Internet. Tsy mila mpivarotra amin'ny Target for Target ianao vao hahafantatra izay tianao. Azon'izy ireo atao ny mividy ity fampahalalana ity amin'ny Facebook sy serivisy maro hafa.
Ho an'ny orinasan-biriky sy mortara, mety ho sarotra kokoa ny mampihatra izany. Na dia manana mpiara-miasa amin'ny varotra aza izy ireo izay afaka mihaino sy mivezivezy hividy, dia tsy fantany afa-tsy izay lazain'ny mpanjifa azy ireo.
Miaraka amin'ny haitao fanilo fampiharana, ireo fivarotana biriky sy rihitra dia afaka miditra tampoka amin'ireo tahirin-kevitra mahery vaika momba ny fanarahan-dia sy ny analytics hatreto ampiasain'ny ecommerce.
Miaraka amin'ny fanilo sy fampiharana ampiasana, ny mpanjifa dia afaka mahazo tolotra manokana, tapakila ary tolo-kevitry ny vokatra mifototra amin'ny fahazarana miantsena teo aloha.
Ny fampidirana ny fanaraha-maso ny toerana ao anaty magazay dia ahafahan'ny app mahalala izay toerana misy ny mpanjifa ary mampihatra tolo-kevitra sy tolotra mifototra amin'izany.
Alao an-tsaina ny mpividy mizaha ao amin'ny faritra fitafiana. Rehefa miditra ao amin'ny departemantan'ny jeans izy ireo dia mahazo fampandrenesana fanosehana miaraka amina coupon 25% tsara ho an'io dia fiantsenana hividianana pataloha io. Na angamba nanolotra marika manokana amidy androany izy ireo, mifototra amin'ny fividianana teo aloha.
Beacon Implementation dia fampiasam-bola amin'ny haino aman-jery teknolojia lafo vidy
Araka ny efa nolazainay teo am-piandohan'ny lahatsoratra, ny teknolojia fanilo dia miankina amin'ny mpandefa (fanilo), mpandray (smartphone) ary rindrambaiko (app).
Ny varotra mamindra dia tsy fividianana lafo. Misy mpanamboatra beacon marobe, toa ny Aruba, Beaconstac, Estimote, Gimbal, ary Radius Network. Ny vidiny dia miankina amin'ny laharam-pahamehan'ny fanilo, ny androm-piainana, ary bebe kokoa miaraka amin'ny fanilo maharitra 18 fonosana avy amin'ny Beaconstac eo ho eo $ 38 isaky ny jiro.
Ny mpandray (finday avo lenta) no ampahany lafo indrindra amin'ny fizotrany, fa soa ihany ho an'ireo mpivarotra antsinjarany fa efa voasaron'ny mpanjifany manana finday ny fandaniana. Mampiseho ireo isa farany Smartphone amin'ny finday 270 tapitrisa mpampiasa any Etazonia, manerantany dia mahatratra 6.4 miliara io isa io, ka tototry ny tsena.
Ny vidin'ny fampidirana ny teknolojia fanilo amin'ny fampiharana dia kely fotsiny amin'ny fampiharana vidiny, Ka tsy handrava ny banky ianao amin'ny fampidirana ireo tombony amin'ny fampiharana anao.
Raha te hanana traikefa amin'ny isa ny varotrao ianao, dia manolo-kevitra ny hijery bebe kokoa amin'ny fotoana mety ahafahan'ny teknolojia fanilo ampiasain'ny rindrambaiko manolotra orinasa antsinjarany.
Ny teknolojia dia somary lafo amin'ny fahafahan'ny karama goavana. Mila manana drafitra marketing fotsiny ianao hamitahana ny mpividy miaraka amina tolotra lehibe ary kendrena ny fitondran-tenan'ny mpanjifany ary ho ao amin'ny klioban'ny mpivarotra varotra fanilo misy app ihany koa ianao.
Tags: ao Arubafitaovana faniloohatra fanilostatuta faniloteknolojia faniloloharanomBeaconstacCVStontolo disneyeddystoneTombanageolocationGimbalKFCkrogerFampiharana miorina amin'ny toeranany McDonaldfinday fampiharanafanilo findaypersonalizationtambajotra radiuspersonalization antsinjaranyvarotra varotrafihetsika fivarotana antsinjaranyfihetsika miantsenateknolojia findaymetrolasibatra